Thoughts Investing နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ | အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သိကောင်းစရာများ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
သငျသညျ ( "သင့်ပါတယ်" အတွက် - ကိုဖတ်ပြီး '' ရပါမည် ') သင့်ပါတယ်သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်သကဲ့သို့ကောင်းစွာသင့်လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီသောအကောင့်တစ်ခုကိုရှာဖွေကာကျယ်ပြန့်အသေးစိတ်ရှာဖွေရေးလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသုတေသန tool ကို World Wide Web ကိုသည်နှင့်မှန်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ် 24 နာရီတစ်ရက်, ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဖိုးအခများ၏ဘာသာရပ်အမြဲ၌မဆက်ဆံနှင့်တစ်လှည်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အွန်လိုင်းအကောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး access များအတွက်ပိုကောင်းအဖြစ်ဘာသာရပ်သင်ယူဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်အဖိုးအခရှိသေးဖြစ်လိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားများနှင့်ကြီးတွေ, ဖန်စီရုံးများအတွက်ပွဲစားများသင်ကမကြိုက်ဘူးသို့မဟုတ်မရှိမရှိအခကြေးငွေကောက်ခံရန်, သို့သော်အချို့အချို့သောခွင်သို့မဟုတ်အကောင့်အချို့အမျိုးအစားများကိုလိုအပ်ကြောင်း "မကြေး" အကောင့်ရှိစေခြင်းငှါသွားနေကြသည်။
အရေးကြီးသောပစ္စည်းပစ္စယပုံနှိပ်သည်အဘယ်မှာရှိကြောင်းအမြဲဖြစ်တယ်, ဒဏ်ငွေပုံနှိပ်ဖတ်ရန်နှင့်သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံကိုင်ပြီးကြောင်းအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့အရာခပ်သိမ်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမပွဲစားအမှန်တကယ် "ဝှက်" အဖိုးအခမှသွားရှည်လျားသောအဘို့မိမိတို့ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ပေါ်သို့ဆွဲထားပေမယ့်သင်သို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရတဲ့နေကြသည်အတိအကျနားလည်ရန်သင့်အားလက်မှတ်ရေးထိုးအရာအားလုံးပင် "ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကို" ကိုဖတ်မှသငျသညျအထိဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်အောင်တချို့ကဝဘ်ဆိုဒ်များမှာလည်းနေ့စဉ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီဖို့လစဉ်နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ data တွေကိုပါလိမ့်မယ်။ သင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စဉ်းစားနေသောအထူးရန်ပုံငွေအပေါ်ရရှိနိုင်ပါအရာအားလုံးကို View ပြုလုပ်မယ့်သင်တို့ကဲ့သို့သင်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှဖွင့်လှစ်ကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအကောင့်ကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မဟာဗျူဟာ Investing Break-တောင်မှ-ဒါမှမဟုတ်- သာ. ကောင်း၏!
အဆိုပါ Break-ပင်-or-ပိုကောင်းနည်းဗျူဟာ အဘယ်သူမျှမအရှုံးပြအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တွင်အဘို့အမြတ်သို့မဟုတ်, (1) ကိုပြသ (2) ဖြစ်စေဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
တစ်ဦးကအစုစုကိုတစ်ဦးလျှော့စျေးမှာဝယ်ယူ 1 တစ်နှစ်ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေကြမ်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်မျက်နှာတန်ဖိုးကိုမှာဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း (မျှော်လင့်) ကိုဆွဲဆောင်စျေးနှုန်း options များဝယ်ယူရန်, ရရှိခဲ့ပြီးအကျိုးစီးပွားမှတဆင့်ငွေပေးသညျ။
အကောင်းဆုံးကိစ္စတွင်: တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမြင့်တက်ဒါမှမဟုတ် options များ၏ဘဝအသက်တာကာလအတွင်းအကောင်းတစ်ဦးအကွာအဝေးကရြောကျကွောငျးညာဘက်ထိတ်အပေါ်ညာဘက်ရွေးချယ်စရာကောက်နေမှာကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်လျှင်, အမြတ်အစွန်းသိသာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကျိုးစီးပွား reinvest မှရရှိသွားတဲ့။
အဆိုးဆုံး: အဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဘဏ္ဍာရေးဥပဒေကြမ်းများအပေါ်ရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါအကျိုးစီးပွား (Break-ပင်) ထို option ဆုံးရှုံးမှုကိုထေမိ။
သြဇာနှင့်ခြင်းကိုအန္တရာယ် (အဘယ်သူမျှမအနားသတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု; မျှတိုတောင်းသောညှစ်) ။ အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကိုမရှိ muss ။
သငျသညျအနိုင်ရအကြီးအကဲများ, သင်ပင်ကိုချိုးဖျက် tails ။
တစ်ဦးငွေကြေးဖောင်းပွမှုခေတ်မှာတော့ရိုးရိုးအချိန်မဆိုကာလအတွင်းဒေါ်လာ၏တူညီသောအရေအတွက်ကကိုင်ပြီးမြို့တော်၏အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးမှုရှိပါသည်။ မြို့တော်တန်ဖိုးကို purchasing power အပေါ်အရင်းနှင့်, ပါဝါ erodes purchasing သကဲ့သို့မြို့တော်ပါဘူး။
သူကပြောပါတယ်ခံရ, ငါသည်အချို့သောနှစ်ပေါင်းရဲ့အဆုံးမှာတစ်ချိုး-ပင်သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားအတွက်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ထဲမဟုတ်ကြောင်းထက်ပိုမိုအနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှိပါတယ်, သေချာပါတယ်။ ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုမသိကြသလော
သင့်ရဲ့အစုစုအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေကြမ်းများထံမှရရှိခဲ့ပြီးအကျိုးစီးပွားကနေငွေကြေးထောက်ပံ့ထားတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ, ကြီးထွားမှုစတော့ရှယ်ယာထက်သူတို့အားထိတ်အပေါ်ရွေးချယ်စရာသကဲ့သို့, အမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူဖြုန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအစားထိုးသွားပါတယ်။
ရလဒ်များ: ဝင်းကဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ဆွဲ, အစတော့ရှယ်ယာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်နှစ်ဦးစလုံးအသက်ရှင်လိမ့်မည်ကဲ့သို့သောအဘို့, ပိုကောင်းတဲ့အတှကျသို့မဟုတ်ပိုဆိုးသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။
သင့်ရဲ့စတော့ရှယ်ယာတွေဆီကနေသွားသင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်၏ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေကြမ်းအကျိုးစီးပွားသင်သည်နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားရန်အဘို့အငွေပေးပါလိမ့်မယ်။ တနည်းကား, မကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
Tags: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးရန်လမ်းညွှန်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအားသာချက်များ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး၏အခြေခံ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအားသာချက်များ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအကွံဉာဏျ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုံခြုံများမှာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး, app ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, အခြေခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးကျေးဇူးများကို, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအဘို့အမဟာဗျူဟာများ, အကောင်းဆုံးကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးများအတွက်အကြံပြုချက်များ, တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဘာလဲ